Okwempandla: ungayinakekela kanjani impandla? | Amadoda aSitayela
Okwempandla: ungayinakekela kanjani impandla?
Okunye okukhathaza kakhulu ukuthi amadoda angaphezu kweminyaka engama-25 ahlupheka ukuthi kube nempandla. Futhi izikhathi eziningi lokhu kungenxa yesifo, i-alopecia nezinye eziningi ngenxa yezici zofuzo noma ukucindezeleka.
Uma uthola impandla, kufanele ukhombise ikhanda lakho lisesimweni. Ngakho-ke, namuhla kwaHombresconEstilo.com sizokunikeza amathiphu wokubonisa ikhanda lakho elinempandla ngesitayela.
Izinwele zivikela isikhumba sasekhanda. Ngokungabi nayo, izodalulwa ekuhlaselweni okuningi, njengelanga, umoya kanye nokungcola kwemvelo. Ngalesi sizathu, sincoma ukuthi ufake i-sunscreen kule ndawo ukugwema ukusha ekhanda.
Le ndawo futhi idinga ukunakekelwa okunamandla kakhudlwana, ngakho-ke kufanele unakekele kakhulu lesi sikhumba, esizozwela kakhulu. Uma ugeza, qhubeka ugeza ikhanda lakho nge-hydraulic shampoo, ungasebenzisi insipho noma eminye imikhiqizo ngoba izokomisa isikhumba ekhanda lakho. Njengamanje, abacwali bezinwele abaningana bathengisa imikhiqizo ekhethekile yokunakekelwa kwe-bald, ngamafutha okuthambisa imaski yokuhlanza nokugcoba. Zisebenzise, ​​zibaluleke kakhulu ekunakekeleni ikhanda nekhanda lakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Okwempandla: ungayinakekela kanjani impandla?
Sawubona. Isikhumba sami sikhanya kakhulu lapho ngishefa, noma imuphi umkhiqizo abawutusayo ukunciphisa ukukhanya
Sawubona, ikhanda lami elinempandla nalo likhanya kakhulu kodwa ngisebenzisa ulayini wezinyosi onemikhiqizo engu-5 futhi inkinga inciphe kakhulu. Ngiyincoma kuwe. Njengamanje babiza ama-dollar angama-35 iphakethe liyibheka online
Ungakwenza kanjani ukuzihlola kwamasende?
Izitayela ezahlukahlukene zokubopha isikhafu